Rehefa mihamora ny fameperana ny dia any Etazonia dia hitombo 10 tapitrisa ny dia avy any UK
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Rehefa mihamora ny fameperana ny dia any Etazonia dia hitombo 10 tapitrisa ny dia avy any UK
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao
Tamin'ny fitsapan-kevitra natao vao haingana, 58% n'ireo mpamaly manerantany no nanambara fa ny fepetra takiana amin'ny quarantine no mpanakana ny fivezivezena iraisampirenena, ary misy 55% milaza fa ho voasakana amin'ny fameperana fitsangatsanganana.
Tsidiho ny mpizahatany sy ny havanao (VFR) izay mety hitarika ny fangatahana amin'ny dingana fanarenana dia lavitra.
Ny fitsangatsanganana VFR dia nitombo tamin'ny tahan'ny fitomboana isan-taona (CAGR) 24.8% teo anelanelan'ny 2021 sy 2024.
Ny sidina UK-Etazonia dia miorina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fanarenana eo amin'ny firenena roa tonta satria mitombo ny fangatahana sidina.
Ny fanambarana fa ny fameperana ny dia any Etazonia ho an'ny mponina any UK vita vaksiny dia hialana volo manomboka ny volana novambra ho avy izao dia hihaona tsara amin'ny olona maniry hiaraka amin'ny fianakaviana sy namana. Ny isan'ny olona mandeha any Angletera hitsidika namana sy havana (VFR) dia miakatra avy amin'ny 10.6 tapitrisa amin'ny 2021 ka hatramin'ny 20.5 tapitrisa amin'ny 2024 - izany dia CAGR 24.8% manaitra. Vaovao tsara fotsiny ho an'ny fizahan-tany amerikana ity, izay handray soa avy amin'ny fizahan-tany mpizahatany UK.
Ny fitsangatsanganana VFR dia mety hitarika ny fangatahana atsy ho atsy satria manomboka mihamora ny fameperana ny dia ary voavaha ny fangatahana mihoampampana. Raha ny tena izy, VFR dia antenaina hitombo amin'ny hafainganam-pandeha bebe kokoa noho ny fialam-boly, izay tsy mahazatra satria ny fialam-boly alohan'ny COVID dia avo kokoa noho ny VFR. Ny fifantohana amin'ny fangatahana fitsangatsanganana VFR dia ho hetsika mahomby ho azy roa UK ary US kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, rehefa mitady hifandray amin'ireo olon-tiany ny mpivahiny UK aorian'ny fisarahana am-bolana maro.
Ny fisalasalana mankany amin'ny dia dia mety hiova amin'ny fanalefahana ny fameperana ny dia sy ny fepetra takiana amin'ny quarantine. Nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana novambra dia vita vaksiny tanteraka UK ny mpandeha dia afaka mandingana ny fepetra takiana amin'ny quarantine ary miatrika famerana fitsangatsanganana kely kokoa rehefa miditra any Etazonia. Na izany aza, dia mbola mila manome porofon'ny valin'ny fitsapana ratsy tsy mihoatra ny telo andro mialoha ny dia na porofon'ny fanarenana avy amin'ny COVID-19 tao anatin'ny telo volana lasa.
Ity fialan-tsasatra ity dia miavaka tsara ho an'ireo izay maniry hivezivezy any ivelany. ny US efa ela toerana malaza ho an'ny mpizahatany UK ary ny fanadihadiana ny indostria dia mampiseho fa ny US no toerana iraisampirenena malaza indrindra fahadimy tamin'ny taona 2019. Miaraka amin'ny famerana ny fanalefahana dia mety hamoaka ny fangatahana mihoampampana izy ary hanome karama ilaina amin'ny orinasan-dia.
Ny sidina mivantana dia mety mitana andraikitra amin'ny famoronana fidiram-bola tena ilaina sy fampitomboana ny fahita matetika amin'ny sidina.
UK-mpiaramanidina mifototra amin'ny matanjaka US Ny fandaharam-potoanan'ny sidina, ao anatin'izany ny British Airways sy ny Virgin Atlantic, dia nitatitra ny fiakaran'ny vidin'ny sidina mankany Etazonia. Ny sidina mivantana dia mety ho tian'ny mpandeha satria mamela traikefa azo antoka azo antoka kokoa noho ny mifandray amin'ny alàlan'ny foibe.